Sidey ku dhammaan doontaa doorashadan dhammaan la’ ee Mareykanka? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Sidey ku dhammaan doontaa doorashadan dhammaan la’ ee Mareykanka?
Sidey ku dhammaan doontaa doorashadan dhammaan la’ ee Mareykanka?
Maalmo ayaa kasoo wareegay markii la shaaciyay in tartankii loogu jiray Aqalka Cad uu ku guuleystay Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraaddiga, laakiin Donald Trump wali ma uusan qiranin guul-darro, mana uusan muujinin wax u eg in laga adkaaday.
Iskaba daa inuu guul darro qirtee wuxuuba jeedinayaa eedeymo aan sal iyo raad toona lahayn oo ku saabsan in doorashada lagu shubtay, taasoo uu sheegay inay horseedday guusha Biden.
Dhanka kalena, wuxuu isku dayayaa inuu soo ceshto tobannaan kun oo cod oo laga dhiibtay gobollada qaar, si uu natiijada u baddalo, xilkana ugu guuleysto mar labaad.
Hase yeeshee dad badan arrintaas waxay u arkaan mid aan rajo fiican laga keeni karin.
Mowqifka Trump uu taagan yahay ee kasoo horjeeda dhaqankii ay sameyn jireen madaxweyneyaashii hore ee Mareykanka wuxuu walaac ku abuuray shacabka, waxaana looga falcelinayaa baraha bulshada iyo warbaahintaba.
Waxaan eegeynaa sida ay qaar ka mid ah dhinacyada ay khuseyso arrintan u maareynayaan iyo sida ugu dambeyn ay kusoo afjarmi karto.
Hoggaamiyeyaasha Xisbiga Jamhuuriga
Ma u quman tahay Donald Trump inuu qirto guul-darro?
Wali lama gaadhin.
“Madaxweynuhu wuxuu xaq buuxa u leeyahay inuu eego eedeymaha la jeediyay, uuna codsado in codadka dib loo tiriyo, sida uu sharciga u oggol yahay.” – Sidaas waxaa yidhi hoggaamiyaha aqlabiyadda Aqalka Senate-ka, Mitch McConnell
Sheekada dhabta ah
Afartii sano ee lasoo dhaafay, siyaasiyiinta xisbiga Jamhuuriga – oo isugu jira xildhibaannada Aqalka Wakiillada iyo saraakiisha kaleba waxay isku dayayeen inay ka gaabsadaan ka jawaabista arrimaha Donald Trump iyo doodaha uu abuuro.
Waxay faruurta u qaniinsanaayeen in mar uun ay ka gudbaan duufaanta Trump.
Sidaas awgeed, iyadoo ay jirto guul darrada madaxweynaha kasoo gaadhay doorashada, dhammaan siyaasiyiinta xisbigiisa waxay muujinayaan inay garab taagan yihiin ilaa inta laga xaqiijinayo natiijada kama dambeysta ah.
Xeer ilaaliyaha guud Bill Barr
“Maadaama ay tahay in eedeymaha halista ah loo wajaho si taxaddar badan, haddana sheegashooyinka aan dhabta ku saleysneyn, male’awaalka ah, ee la iska sameystay laguma abuuri doono baaritaanno heer federaal ah.” – ayuu Barr ku yidhi bayaan uu u diray waaxda caddaaladda..
Maalintii Isniinta, Xeer ilaaliyaha Guud, Bill Barr wuxuu warqad u diray saraakiisha sar sare ee waaxdiisa, isagoo albaabbada u furay in si dhakhso ah loo billaabo baaritaanno ku saabsan in musuqmaasuq lagu sameeyay doorashada.
Wuxuu amar ku bixiyay in tallaabadaas la qaado ka hor inta aysan gobollada dib u kala caddeynin natiijada doorashada.
Arrimtan waxay rajo siineysaa Trump iyo taageerayaashiisa, oo markii horeba ku doodayay in codadkii doorashada laga xaday.
Dadka ku hareereysan Trump
Maya! (laga yaabee?)
“Mar dhow ayaan la hadlay madaxweyne Trump waxaana u sheegay inaan jeclahay oo aan ku faano sida uu u garab taagan yahay sharciga, dastuurka iyo nidaamka waddankeenna Mareykanka.” – sidaas waxaa tidhi la taliyaha dhinaca sharciga ee Trump, Jenna Ellis, oo qoraal soo dhigtay barteeda Twitter-ka.
Shakhsiyaadka ugu dhow madaxweynaha – gaar ahaan kuwa muddada dheer ay isla socdeen, sida Rudy Giuliani – ayaa si shaacbaxsan ugu ololeynaya in Trump uu sii wado loollanka uu galinayo natiijada doorashada 2020-ka.
Waxay sidaas u sameynayaan waa gar. Haddii uu madaxweynaha ka tago xafiiska, dhammaantood waxay weynayaan shaqooyinkooda.
Dadkaas qaarkood, sida afhayeenka madaxweynaha, Kayleigh McEnany, arrintan waxay uga dhigan tahay guul darro aad u weyn.
Xog hayaha Arrimaha Dibadda, Mike Pompeo, wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu caansan ee uu saameynayo isbaddalka maamulka.
Labada wiil ee waaweyn ee Trump, Don Jr iyo Eric, waxay iyaguna si weyn u difaacayaan aabbahood iyo fikirkiisa ku aaddan in doorashada lagu dhubtay.
Maya lagama yaabo!
“Waxaan halkan u imid inaan jacayl iyo taageero u muujiyo madaxweynaheenna, Donald Trump. Waxaa la sameeyay musuqmaasuq weyn. Waxaa jira codad badan oo aan wali la tirinin, waxa la tiriyay oo dhan waa been abuur iyo magacyada dad dhintay.” – waxaa sidaas yidhi qof taageera Trump oo ku sugan magaalada Houston ee gobolka Texas, mar uu la hadlayay BBC-da.
Markii doorashada la aadayay isbuucii lasoo dhaafay, qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha Trump waxay ku qanacsanaayeen in musharraxooda uu guuleysan doono, inkastoo saadaalinta la sameeyay ay sidaas ka duwaneyd.
Iyadoo la ogaa sida 2016-kii loo saadaaliyay inay guuleysaneyso Hillary Clinton, ilaa laga ogaaday inay guul darreysatay, waxay dareemayeen in rajadooda aysan meel cidlo ah ku bixi doonin.
Ololaha Trump wuxuu qorsheynayaa isusoo baxyo dalka oo dhan ka dhaca oo ay ku magacaabeen “jooji xatooyada”, waxaana ka mid ah mid ka dhici doona Washington, DC maalinta Sabtida ah.
Muddo dheer waxaa lasii ogaa in haddii uu Trump go’aansado dagaal ay taageerayaashiisa ku garab istaagi doonaan.
“Waxay ila tahay inay arrntani ceeb tahay, xoogaa yar… sideen go’aankan u qaadan karaa? Waxay ila tahay in taariikh fiican aysan ku reebi doonin dhaxalka madaxweynaha.” – Ayuu yidhi Biden.
Tan iyo markii la shaaciyay in Joe Biden uu ku guuleystay doorashada 2020-ka, maalintii Sabtida ahayd, isaga iyo kooxdiisa diyaarineysa munaasabadda xil-wareejinta waxay wadeen howsha ku sabasan caleemo-saarka, oo hadda u socota si habsami leh.
Isniintii wuxuu la kulmay kooxdiisa u qaabilsan la dagaallanka coronavirus, Talaadadiina wuxuu su’aalo uga jawaabay saxafiyiinta, halkaasoo uu ku ballan qaaday inuu isbuucyada soo socda dhisi doono maamul heer sare ah.
Biden wuxuu meesha ka saaray walaaca ku aaddan in laga daahin doono la wareegista xafiiska iyo isticmaalka dhaqaalaha dowladda, isagoo sheegay in arrintaasi aysan dhabarjab ku noqon doonin.
Jawaabta ka akhri Twitter-kiisa…
“Shacabku ma aqbali doonaan doorashadan lagu shubtay!”
Donald Trump kaliya ayaa og sababta uu ilaa hadda u qiran la’yahay guul darrada uu kala kulmay tartankii uu la galay Biden, inkastoo wali uu daba socdo codad gaadhaya tobannaan kun oo laga dhiibtay gobollada qaarkood.
Trump xilka dib ma ugu laaban karaa?
Maxay tahay haweeneyda ka dambeysa guusha la yaabka leh ee Biden?
Inkastoo uu saameyn leeyahay dagaalka iyo dacwadaha ay wadaan Trump iyo kooxdiisa, haddana dadka u dhuun daloola arrimaha doorashada Mareykanka waxay aaminsan yihiin in howlahaas oo idil ay yihiin kuwo aan wax sidaas u buuran ka baddaleynin natiijada hadda la ogyahay.
Waxa kaliya ee Biden iyo xisbigiisa Dimuqraaddiga u haray waa in xilka loo dhaariyo 20-ka bisha January, markaasna waxaa dhammaanaya madaxweynenimada Trump, ha oggolaado guul darro ama yuusan oggonaanine.
Trump waxaa mar kasta u furan inuu u tartamo doorashada 2024-ka, dabcan.
Dastuurka Mareykanka ayaa dhigaya in qofka uu labo xilli madaxweyne noqdo, midkiina uu dhammeysto afar sano, laakiin khasab ma aha in labada jeer ay isku xigaan.
Hadda waa laga yaabaa inay dhammaatay doorashada 2020-ka, laakiin ma dhammaanayo tartanka siyaasadeed ee Jamhuuriga iyo Dimuqraaddiga.
Previous articleAbiy Ahmed oo ku dhowaaqay inay qabsadeen galbeedka gobolka Tigray+Wararkii ugu danbeeyay
Next articleDheymankii ugu weynaa Abid oo lagu xaraashay lacag ka badan 26 Milyan oo Dollar
DAAWO:Xil Fiqi”MD Farmaajo labo sano ayuu iska hurdaaye hada ayuu doonayaa in oo….
Mareykanka oo sagootin u sameeyey ciidamo loo soo diray Somalia + Tiradooda
DEG DEG” Ciidaamda Amisom oo qarax culus lagu eegtay Muqdisho
Daawo:Salaad Cali Jeelle oo si kulul ugu jawaabay Xasan Sheekh hadalkii shalay oo ku weeraray MD Farmaajo ee arinta...
Beesha Caalamka oo shaacisay inaysan taageeri doonin natiijada doorashada Jubaland
Madaxweyne Dani Oo Ka Jawaabay Weerarkii Kaga Yimid C/xakiin Dhoobo
Nin Horay Dil Argagax Leh Kageystay Qardho oo Gacanta Lagu Dhigay…
XOG: Ahlusuna Oo La Ogaaday Shakhsiga ay udooranayaan Madaxweynaha Galmudug
Sawirro:Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Oo Maanta Dhaqan Geliyey Ballan Uu Ka Qaaday Farmaajo
XOG: Mukhtaar Roobow oo loo diyaarinayo inuu noqdo madaxweyne…